Imozulu yase-India: Leliphi elona xesha lilungileyo lonyaka lokundwendwela i-India? | Ukuhamba kwe-Absolut
Indiya yaseIndiya | | Ihlaziywe 18/08/2020 12:05 | Indiya
La Indiya , emi embindini weAsia uyonwabela Uluhlu lwemozulu. Okona kwaziwayo sisiganeko esibizwa ngokuba imvula, Ohlala kulo lonke ixesha lasehlotyeni. Olona phawu lwalo lubalulekileyo yimvula enkulu, ende. Ihamba ilizwe lisuka emazantsi liye emantla inyusa izinga lokufuma. Imonsoon izisa izikhukula kunye neengxaki ngenxa yoko kuthungelwano lwendlela yelizwe, zona ngokwazo ezishiya zinqweneleka ngaphandle kokujonga imozulu ngelo xesha.
Kuqala kuphela ngo-Septemba xa i-monsoon incipha ngamandla. Unxweme olusempuma yelizwe yindawo yokugqibela yokuva iziphumo zalo, kodwa sele ikho ngoDisemba imozulu yaseIndiya izinzile ngokupheleleyo, ipholile kwaye ipholile. Ubusika emantla buyabanda, ngenxa yokusondela kwiiHimalaya, lo gama elasezantsi lihlala lishushu. Ngentwasahlobo, ngexesha lesithathu lokuqala lonyaka, Imozulu yeziko leli lizwe ipholile. Amaqondo obushushu kuloo ndawo ayenyuka phakathi kuka-Matshi noMeyi ngamaqondo obushushu athe afikelela kuma-48 degrees celcius, ubushushu obuyehla ngokuqala kwemozulu, kugqibe umjikelo ochazwe ngaphambili.
Elona xesha lilungileyo lokundwendwela i-India liphakathi kuka-Novemba no-Matshi, ngokusisiseko ngexesha lonyaka elomileyo.. Izixeko ezisemantla ezinje ngeNew Delhi okanye iAgra ziyonwabela imo yezulu entle kakhulu, njengoko kunjalo embindini welizwe. Umazantsi, nangona imvula iqala phakathi enyakeni, ihlala ishushu ngokusisigxina. Ukuya kwiiHimalaya kwaye ubone ezona ntaba ziphakamileyo emhlabeni Kungcono ukulungiselela uhambo ngo-Agasti okanye ngoSeptemba, xa imvula ingazange ifike kuloo mmandla welizwe.
Iimvula zeMonsoon zichonga iindlela zabakhenkethi eIndiya. Nangona kwithiyori kukho amaxesha onyaka, azinako ukwahlula-hlula ngokucacileyo unyaka wonke. Ijografi yayo sisitshixo sokuqonda le mbiza inyibilikayo yemozulu, ukusuka kwiintaba ezigqunywe likhephu kwiiHimalaya, ezibhalisa amaqondo obushushu asezantsi elizweni, ukuya kwiziqithi zeparadesi zeLaccadives, ukongeza kulwandiso lwayo olungaphezulu kwezigidi ezintathu zesikwere iikhilomitha. I-Indian Ocean ikwayinto echaphazela ukukhula kwemozulu yelizwe. Ngamanye amaxesha, iinkanyamba ezivela elwandle zizisa imvula njengonxweme, ngakumbi emazantsi. Ngokusisiseko e-India amaxesha onyaka entwasahlobo, ihlobo, iinyanga, ezithatha indawo yasekwindla, nasebusika zikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imozulu yase-India: Leliphi elona xesha lilungileyo lokundwendwela i-India?
URaclette, isitya esiqhelekileyo saseSwitzerland
I-porcelain yeTricolor evela kubukhosi baseTang